Ịgụ Oge: 5 nkeji Hashtag bụ okwu nke afọ n’otu oge, e nwere otu nwa ọhụrụ aha ya bụ Hashtag, na iwu machibidoro okwu a na France (mot-dièse). Hashtags na-aga n'ihu ịnwe nnukwu uru mgbe ejiri ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị na mgbasa ozi mmekọrịta - ọkachasị ka ojiji ha agbasawanye karịa Twitter na Facebook. Y’oburu na ichoro ihe ndi ozo mebere, lee Hashtag Guide nke anyi biputere. I nwekwara ike ịgụ ọkwa anyị na ịchọta hashtags kachasị mma maka mmekọrịta ọ bụla
Wenezdee, Machị 7, 2018 Wenezdee, Machị 7, 2018 Douglas Karr
Ịgụ Oge: 2 nkeji Echiche m banyere mgbasa ozi ọha na eze na-adịkarị iche na ndị nọ na ụlọ ọrụ m. Na usoro iwu, enwere m mmasị na mgbasa ozi mmekọrịta yana ohere ọ na-enye ndị azụmaahịa iru ndị ahịa na atụmanya na ọkwa onwe. Eziokwu ahụ dị nnọọ iche, n'agbanyeghị. M na-ele ulo oru inwa ahu nagide na-elekọta mmadụ media otu ụzọ ha si eme ndị ọzọ ahịa ọwa. N'ọnọdụ ụfọdụ, nke a emeela ka nzaghachi robotic dị egwu mere ka ọha na eze mara onye na-elekọta mmadụ mgbasa ozi
Ịgụ Oge: 2 nkeji Ọ bụrụ na ị bụrụla onye na-agụ akwụkwọ a ruo nwa oge, ị maara etu m si eleda ozi email na arụmụka mgbasa ozi ọha na eze anya n'ebe ahụ. Iji kpughee ikike nke usoro ahia ọ bụla, ịkwado mkpọsa ndị ahụ n'ofe ọwa ga-eme ka nsonaazụ gị dịkwuo mma. Ọ bụghị ajụjụ banyere, ọ bụ ajụjụ na. Site na mgbasa ozi ọ bụla na ọwa ọ bụla, olee otu ị ga - esi hụ na ị bawanye na nzaghachi ọnụọgụ na ọwa ọ bụla ị nwere. Email? Na-elekọta mmadụ? Ma ọ bụ
Friday, December 4, 2015 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ịgụ Oge: 4 nkeji Ọ ka dị anya ịkpọ nkụ nke Twitter, ọ bụ ezie na ọ bụ m n’onwe m ka ọ na-adị m ka ha na-eme mmelite ndị na-anaghị emewanye ma ọ bụ na-ewusi ikpo okwu elu. N'oge na-adịbeghị anya, ha ewepụla ọnụọgụ anya dị na bọtịnụ mmekọrịta ha na saịtị. Enweghị m ike iche n'echiche ihe kpatara ya ma ọ dị ka ọ nwere ike inwe mmetụta na-adịghị mma na njikọ aka na mkpokọta mgbe ị na-elele okporo ụzọ Twitter na saịtị ntanetị. Zuru mkpesa… ka anyị hụ ihe ọma
Ịgụ Oge: <1 nkeji Ewezuga ndebiri email na-anabata, teknụzụ dị na email agbanwebeghị ọtụtụ afọ iri gara aga. Agbanyeghị, dịka otu n'ime nloghachi kachasị ike na azụmaahịa azụmaahịa, ndị na-ere ahịa na-ahụ nloghachi dị ukwuu mgbe ha na-eme ka teknụzụ zuru oke na-agbasa ozi na ozi ha na-ekesa. Ndị a bụ Ọganihu 14 na Nkà na ụzụ Nke ahụ na-emetụta Email Marketing Real-oge nkeonwe dabere na data ntanetị. Nnukwu isi mmalite data ga-enye amụma na ọdịnaya dị na email ozi. Ozi cohesive